मधेसी नेतासँग भएको लिखित सम्झौता उल्लंघन गर्ने पार्टी कांग्रेस, मधेसविरोधीको ‘लेप’ एमालेलाई ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मधेसी नेतासँग भएको लिखित सम्झौता उल्लंघन गर्ने पार्टी कांग्रेस, मधेसविरोधीको ‘लेप’ एमालेलाई ?
सबै तर्क सिद्धिएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र ? मधेसी नेतासँग भएको लिखित सम्झौता उल्लंघन गर्ने पार्टी कांग्रेस अनि मधेसविरोधीको ‘लेप’ लाग्ने एमालेलाई ? मधेसविरोधी पार्टी कुन हो खोतल्नचाहिँ २३ वर्षयता भएका सम्झौता खोज्नुपर्ने हुन्छ । पटक–पटक चारचोटिसम्म कांग्रेस सरकारमा हुँदा मधेसीसँग चारवटा लिखित सम्झौता भएको भेटिन्छ । सायद अहिले राजपाका एकीकृत नेताले विगतका ती तीतो बिर्सिसकेका होलान् । ती सबै सम्झौतामा सत्तारुढ दल कांग्रेस नै हस्ताक्षरकर्ता छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, अर्जुननरसिंह केसी, रामचन्द्र पौडेलसम्म हस्ताक्षरकर्ता हुन् । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनीसहित तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्य र अर्जुननरसिंह केसी अनि मधेसी पार्टीका तर्फबाट राजेन्द्र महतो र हृदयेश त्रिपाठीले ०५० साल मंसिर ५ गते पहिलो सम्झौता गरेका थिए । दोस्रो सम्झौता ०५५ साल कात्तिक ६ गते भएको हो । सो सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता केसी छन् भने मधेसी नेताको तर्फबाट तत्कालीन सद्भावनाका नेता रामेश्वर राय, भोगेन्द्र ठाकुरहरूले सही धस्काएका छन् । तेस्रो सम्झौता गर्दा पनि हस्ताक्षरकर्ता रामचन्द्र पौडेल छन् । ०६४ साल भदौ १३ गते भएको उक्त सम्झौतामा मधेसी नेताका तर्फबाट उपेन्द्र यादवले सही गरेका हुन् । चौथो पटक सम्झौता गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ०६५ साल फागुन १६ गतेको उक्त सम्झौतामा राजेन्द्र, महन्थ, उपेन्द्रले हस्ताक्षर गरेको भेटिन्छ । यसरी चार पटकसम्म लिखित सम्झौता कांग्रेससँगै भएको छ, जो आजसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । बरु यी सबै तिक्तता बिर्सेर मधेसी नेताले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मतदान गरेका छन् ।
अझै रोचक तथ्य । नश्लीय राजनीति एमालेले गरेको आरोप मधेसी नेता लगाउन पछाडि पर्दैनन् । दलगत रूपमा नेपालमा मधेसी र पहाडिया फरक–फरक हुन् भन्ने आधारसमेत कांग्रेसले नै तय गरेको हो । जस्तो ः ००८ सालमा तराई कांग्रेस वेदानन्द झाले कांग्रेसपार्टी मधेसविरोधी भयो भन्दै फुटाए । उनलाई कारबाही गरिएको पनि देखिएन । हामी चुक्यौं भनेर कांग्रेस आफैंले फुटेको पार्टीसँग माफी मागेको पनि पाइएन । ०१५ सालमा कांग्रेसबाटै फुटेर मधेसी क्रान्तिकारी दल खुल्यो । रघुनाथ ठाकुरले मधेसविरोधी भएको आरोप लगाउँदै पार्टी फुटाएका हुन् । अनि, ०४६ सालमा कांग्रेस टुक््रयाएर गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् खोले । गज्जुबाबुले लगाएको आरोप पनि उही थियो– कांग्रेस मधेसविरोधी भयो । ०६३ सालमा महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार, जेपी गुप्ता, शरत्सिंह भण्डारी, अमर यादवले कांग्रेसलाई फुटाएर मधेसको राजनीति गर्न थालेका हुन् ? पार्टी फुटाउँदा कांग्रेस मधेसविरोधी भएको आरोप यिनैले लगाएका थिए † कांग्रेसबाट यसरी छुट्टिएका उनीहरू नै कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन दौडिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन अनेक शर्त तेस्र्याएर अवरोध सिर्जना गर्ने यिनै नेताले सोही पार्टीका अमुक नेतालाई विना शर्त मतदान गर्छु भन्नुको अर्थ के ? चाहे सुशील, प्रचण्डलाई होस् वा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन टाउकाले टेकेर संसद् छिर्ने नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतालाई भाग नलिन उर्दी जारी गर्नुको अर्थ के ? एउटै पार्टीले एकपटकमा देखाएको द्वैध चरित्रको असली नमुना यही होला । लाग्छ, राजपाका नेता अहिले पनि कांग्रेसमै कार्यरत छन् । कोही घोषित रूपमा, कोही अघोषित रूपमा । उनीहरूको काज सरुवा मात्र राजपामा भएको हो । मूलथलो कांग्रेस नै हो ।आजको जनआस्थाबाट